बुटवलमा ‘आगो सल्काएर’ मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल काठमाडौंमा! – AayoMail
बुटवलमा ‘आगो सल्काएर’ मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल काठमाडौंमा!
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असोज १८ गते १३:५५
शुक्रबार बिहानै मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाए। बैठकका बारेमा मन्त्रीहरूलाई केही थाहा थिएन। मुख्यमन्त्री आफैंले प्रदेशको नाम, ‘लुम्बिनी प्रदेश’ र राजधानीको नाम ‘दाङ देउखुरी उपत्यका’ बनाउने प्रस्ताव पेस गरे। मन्त्रीहरू मुखामुख गरे, मुख्यमन्त्रीसँग दोहोरो कुरै भएन।
त्यस दिन मन्त्रिपरिषद बैकठकको नियमित चारवटा मात्रै अजेन्डा थिए। पाँचौं अजेन्डा मुख्यमन्त्री आफैंले मन्त्रिपरिषद ल्याएका थिए।
त्यसलगत्तै हतार-हतार प्रदेश ५ को राजधानी सार्ने प्रस्ताव शुक्रबार नै प्रदेशसभामा पेस भयो।
विपक्षीले होहल्ला गरे।
अनि, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संसद १९ गतेसम्म स्थगित गरिदिए। संसदमा हल्लाखल्ला हुँदै गर्दा बुटवलमा आन्दोलनको आगो सल्किसकेको थियो। नेपाली कांग्रेसलगायत आन्दोलनकारीले १८ गतेदेखि नै पूरै रुपन्देही जिल्ला बन्द आह्वान गरेका छन्।
शनिबार मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निवासमा नेकपाका सांसदहरूलाई बैठकमा डाके।
बैठकमा सांसदहरूबीच चर्काचर्की भयो। सांसदहरू बुटवल र दाङको पक्षमा बाँडिए।
त्यत्तिकैमा १४ जना सांसदले लिखितरूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए।
मुख्यमन्त्रीले सबैलाई एक भएर प्रस्तावको पक्षमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिए। सरकारको प्रस्तावकै पक्षमा लाग्न सबै सांसदलाई पार्टीको ‘ह्विप’ जारी भयो। बैठक सकियो।
मुख्यमन्त्री निवासमा जानकारी दिन नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पत्रकारहरुलाई डाके।
उनले कुरा सुरु गर्दागर्दै मुख्यमन्त्री काठमाडाैं जान भन्दै गाडी चढेर भैरहवा विमानस्थलतिर लागे।
त्यसैबीचमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालबीच घोचपेच चल्यो।
सामाजिक विकासमन्त्री बरालले सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावमा मतदान गर्ने निणर्य भएको बताए। र, अब राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा हुने बताइरहँदा सरकारका प्रवक्ता चौधरीले त्यस्तो नभएको बताए।
‘होइन, कुरा असहमतिको पनि आएको छ। पक्षविपक्षमा माननीयहरूले कुरा राख्नुभो। अहिलेका लागि राजधानी बुटवल नै हो, सरकारले प्रस्ताव मात्रै लगेको हो। पास नहुँदासम्म राजधानी बुटवल नै हो,’ उनले भनेका थिए।
ती दुई मन्त्रीको कुरा सुन्दा नेकपाभित्रै पनि राजधानी विवादले आगो लागिसकेको प्रष्टै थियो।
प्रमुख सचेतक ढकालले पत्रकारहरूसँग राजधानीको अजेन्डामा दाङ उपयुक्त भएको निर्णय भएको बताए। उनले भने, ‘असहमति भएको भए पनि अब माननीयहरूले सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावमा मतदान गर्नुहुन्छ।’
उनले बैठकमा चर्काचर्की भएको विषय, नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको विषयमा जानकारी नै दिएनन्। सचेतक ढकाल छोटकारीमा निर्णय सुनाएर तर्किने प्रयास गरे।
मुख्यमन्त्री काठमाडाै‌ं नपुग्दै नेकपा संसदीय दलमा भएको बैठकको चर्काचर्की र नोट अफ डिसेन्टको विषय बाहिर आयो।
राजधानीको विषय अगाडि बढेपछि मुख्यमन्त्री प्रदेशसभा गएका छैनन् भने पत्रकारसँग कुराकानी पनि गरेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव पेस गर्न लगाए, आफू उपस्थित भएनन्। शनिबार प्रमुख सचेतकलाई बैठकको निर्णयबारे पत्रकारसँग बोल्न लगाए आफू देखिएनन्।
आइतबार उनले संसदमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न मन्त्री केसी र प्रमुख सचेतक ढकाललाई जिम्मेवारी दिएका छन् तर, उनी काठमाडौंमै छन्।
अहिले बुटवलसहित रुपन्देहीका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्किएको छ। टायर बालेर र गाडी तोडफोड गरेर आन्दोलन चर्काउने प्रयास भइरहेको छ।
सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधित्व गर्ने रुपन्देही सञ्जालले विरोध र्‍याली निकाली कोणसभा गरिसकेको छ।
सञ्जालले सोमबार लुम्बिनी बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले आइतबार रुपन्देही बन्दको घोषणा गरेको छ भने सोमबार प्रदेशसभा भवन घेराउ गर्ने कार्यक्रम कांग्रेस र रुपन्देही सञ्जालले बताइसकेका छन्।
शुक्रबार संसदमा राजधानीको नाम र केन्द्रको प्रस्ताव लैजानुअघि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारी र नेताहरूलाई निर्देशन दिएपछि मध्यरातपछिसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवसहित केही कर्मचारी आँखा मिच्दै कानुन र दस्तावेजका फाइल मिलाउन बाध्य भए।
अहिले मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा छन्।
काठमाडौंमा उनले दुई रणनीति बनाएर पार्टी नेता भेटिरहेका छन्।
पहिलो, नेकपाका सांसदहरूलाई सकेसम्म ह्विप नै लगाएर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गराउने।
दोस्रो, यदि लुम्बिनीका सांसदहरू मतदानबाट बाहिरिए विपक्षी दल कांग्रेस र साना दलका सांसदलाई सम्बन्धित पार्टीका ठूला नेताबाट दबाब दिन लगाएर प्रस्ताव पारित गर्ने।
उनले काठमाडौंमा रणनीति बनाइरहँदा बुटवलमा रहेको उनकै दलका सांसदहरूले भने मुख्यमन्त्रीले कोरोना महामारीको बेला राजधानीको विषय उठाएर बुटवलमा आगो सल्काएको आरोप लगाएका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीले हाम्रो त राजनैतिक भविष्य नै सकिदिनुभयो, आफू भने काठमाडौंमा तानाबाना बुन्दै हुनुहुन्छ होला,’ आइतबार बिहान नेकपाका एक सांसदले पत्रकारसँग अनौपचारिकरूपमा भनेका थिए।